राष्ट्र बैंकले खरिद गरेको १ अर्व ९२ करोड अमेरिकी डलर कहाँ गयो ? – USNEPALNEWS.COM
राष्ट्र बैंकले खरिद गरेको १ अर्व ९२ करोड अमेरिकी डलर कहाँ गयो ?
by यूस नेपाल न्युज February 14, 2018
सर्वसाधारणले डलर प्राप्तिका लागि कठिनाइ भोगिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले पछिल्लो छ महिनामा १ अर्ब ९२ करोड अमेरिकी डलर खरिद गरी विभिन्न च्यानलमार्फत बजारमा पठाएको जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर १ अर्ब ९२ करोड खुद खरिद गरेको थियो । तरलता प्रभाव पार्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त डलर खरिद गरेको थियो ।
त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड बाराबरको डलर विभिन्न च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु २३ अर्ब ५८ करोड बराबरको डलर स्थायी तरलता सुविधा उपयोगको लागि लगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यो डलर अहिले बजारमा छ ।
डलर चाहने सर्वसाधारणले कमर्सियल बैंक वा सटही सेवा प्रदायकबाट डलर लिँदै आएका छन् । ६ महिने समीक्षा अवधिमा खुला बजार कारोबारमार्फत् कुल रु ६९ अर्ब ३३ करोड तरलता प्रवाह भएको केन्द्रीय बैंकले औंल्याएको छ । बैंकहरूले डलर अभाव देखाउँदै सर्वसाधारणलाइ सटही सुविधामा कञ्जुस्याइँ गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यस्तो आँकडा सार्वजनिक गरेको हो।
यस क्रममा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको १४ दिने रिपो बोल कबोलमार्फत् रु ४४ अर्ब ५ करोड र सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत् रु २५ अर्ब २८ करोड तरलता प्रवाह गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु १५ अर्ब ४० करोड तरलता प्रवाह भएको थियो।
समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब २० करोड र यूरो ४ करोड बिक्री गरी रु २३१ अर्ब ६४ करोड बराबरको भा.रु. खरिद भएको समेत नेपाल राष्ट्र बैकले सोमबार जारी गरेको ६ महिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ४ करोड खुद खरिद भई रु २१९ अर्ब ३५ करोड खुद तरलता प्रवाह भएकोे थियो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को ६ महिनासम्ममा खुलाबजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत पटक–पटक गरी रु १२९ अर्ब २० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।
अमेरिकामा ईन्जाले गर्यो अर्थमन्त्रीसंग छलफल
by यूस नेपाल न्युज	 August 10, 2018
रुसी मुद्रा २०१७ यता सबैभन्दा कमजोर
सगरमाथा सिमेन्ट गुणस्तरहीन,बिक्री वितरण बन्द गर्न निर्देशन
by यूस नेपाल न्युज	 August 2, 2018
प्रीति बनिन् नयाँ मिस मंगोल
by USNEPAL NEWS	 September 26, 2016
लोकतन्त्रको हीतका निम्ति व्यवसायीक पत्रकारीता : धर्मेन्द झा
by USNEPAL NEWS	 July 6, 2016
एक सय ४८ बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण
by USNEPAL NEWS	 November 3, 2016